About us - Hebei Yuniu Fibreglass Ukukhiqiza Co., Ltd.
Ingqalasizinda yethu ehlome kahle ibalulekile ekukhuleni nasekukhuliseni imisebenzi yebhizinisi lethu. Izikhungo eziyinkimbinkimbi nezesimanjemanje zisisiza ukuba sithuthukise imikhiqizo ye-Fiber-Glass ngempumelelo. Ingqalasizinda yethu isabalele indawo enkulu futhi ihlukaniswe yaba yiyunithi yokukhiqiza, ukuhlukaniswa kwekhwalithi kanye neyunithi yokugcina impahla.
Iyunithi yethu yokukhiqiza ifakwe imishini yenhloso ekhethekile namathuluzi adingekayo nemishini. Ngokusetshenziswa kwale mishini, siyakwazi ukwenza imikhiqizo yethu ngobuningi futhi sihlangabezane nezidingo zamakhasimende ethu.
Inkampani yethu inomnyango wethu wensizakalo ekhethekile ngemuva kokudayiswa, imikhiqizo ijabulele udumo oluphakeme kwezasekhaya futhi ithandwa emakethe yamazwe omhlaba nayo.
Umsebenzi wethu ukukhonza ukuthengwa kwezinto eziyinhlanganisela zomhlaba wonke, ukwenza impilo yabantu iphephe kakhulu, kube kwemvelo kakhulu.
Siyakwamukela ukubambisana kwebhizinisi ngemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme nensizakalo eqotho, ukunqoba ikusasa elihle ndawonye!
Siyaqinisekisa ukuthi Imikhiqizo ye-Fibre-Glass inikela ngamazinga ekhwalithi ephezulu. Izilawuli zethu zekhwalithi ziqapha njalo isigaba sonke senqubo yokukhiqiza ukuqinisekisa ikhwalithi ephelele yemikhiqizo yethu. Silandela ubuchwepheshe bamuva nenqubo yokulawula ikhwalithi, eqinisekisa amazinga nezincazelo zekhwalithi.
Le nkampani iyakwazi ukunikela ngekhwalithi yekilasi lokuqala nemikhiqizo eyinhloko ngomkhondo ophelele wekhono nge-BV, SGS ne-ISO9001.
Ngakho-ke, ungaqinisekisa ikhwalithi yethu ephelele nensizakalo.
Kusukela yasungulwa ngo-2012, ne ephelele yokuthengisa iqembu ekhaya aphesheya.Imikhiqizo yethu zithengiswe emazweni ayisishiyagalombili nesithupha.Sinengxenye yemakethe eYurophu, eNyakatho naseNingizimu Melika, e-Australia, e-Afrika, eMiddle East naseNingizimu-East I-Asia.
Sinikeze ithuba, futhi sizokubuyisela ngokwaneliseka.Sibheke phambili ngobuqotho ekusebenzisaneni nani sibambene.